Blogging Corporate-ka Koonfur Afrika | Martech Zone
Sabti, Agoosto 21, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkan wuxuu ahaa mid qurux badan oo la yaab leh. Aniga iyo Chantelle waxaan kaqeyb galnay saxiixayagii ugu horeeyay ee rasmi ah oo rasmi ah oo aan la galno dadka cajiibka ah ee reer Wiley at blog Indiana. Waxay ahayd arrin lagu degdegay daawashada dadyowga soo qaadanaya buugga! Waxaan u baahday inaan maalinta la qaato inaan la dabaaldego dad badan oo dad ah oo i taageeray, xujeeyay oo ila saaxiibay sanadihii la soo dhaafay - aad iyo aad u tiro badan inaan liisto! Aad ayaan u mahad naqayaa!
Kadib - maalintii xitaa way sii fiicnaatay markii aan ka helay muuqaalkan cajiibka ah ee Youtube Arthur VanWyk, suuqeeye baraha bulshada, baloogle iyo wacdiyayaal caan ah oo ka yimid Koonfur Afrika. Arthur iyo aniga waxaan isku xirnay Twitter. Ma aanan hubin in buugga laga heli doono Koonfur Afrika iyo in kale sidaa darteed waxaan u dalbannay nuqul isaga ah. Inuu waqti siiyay inuu na mahadceliyo oo uu soo dhigo fiidiyowgaan runti waxay iga dhigtay inaan xoogaa ilmeeyo farxad!
Arthur - Ma sugi karo ilaa aan la kulanno hal maalin sidaa darteed waan ku qori karaa shakhsiyan buugga waxaanan kugu siin karaa soo dhaweyn weyn. Waxaad sameysay maalinteyda!
Isla marka aan helno fursadda, aniga iyo Chantelle waxaan kuu soo diri doonnaa fiidiyoow!
Tags: Arthur vanwykbuugga ugu fiicanbuugga qoraalkabaloog u samaysanayaflannery chantelleblogging shirkadahabuugga qorista shirkaddablogging shirkado loogu talagalay dummiescaalamka
Oo halkan waa mid kale, halkan oo ku yaal Greenfield Indiana! Mahadsanid Greg!